Random Thoughts | The World of Pinkgold
Ultimate Truth (Uncanny – But True)
Posted on March 1, 2009 by cuttiepinkgold
(အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ကို ရှာတွေ့တိုင်းမှာ တစ်ယောက်ယောက်က သော့ကို ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်)
(မှားဖို့တာဝန်ကတော့ လူ့တာဝန်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် ခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုတာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပေါ်လစီ မဟုတ်ဘူး။)
(အောင်မြင်မှုကို သွားဖို့လမ်းလား… အမြဲတမ်း တည်ဆောက်ဆဲပဲလေ။)
(အရက်ဟာ ဘာပြသနာကိုမှ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ထပ်စဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့ နို့သောက်တာကလည်း မဖြေရှင်းပေးနိုင် ပြန်ဘူး။)
(ပိုက်ဆံချေးလို့ ရဖို့ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး အဲ့ဒီပိုက်ဆံကို မလိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ လိုတယ်။)
(အလင်းက အသံထက်မြန်တယ်ဆိုတော့.. လူတွေရဲ့ အသံကိုမကြားရခင် သူက လင်းလင်းကြီး အရင်ပေါ်လာရမယ်။)
Everyone hasascheme of getting rich? Which never works
(လူတွေမှာ ဘယ်တော့မှ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ချမ်းသာနည်းတွေ ရှိတယ်။)
(စစချင်း မအောင်မြင်ခဲ့ရင် သင်ကြိုးစားဖူးတဲ့ အထောက်အထားမှန်သမျှကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ။)
You can never determine which side of the bread to butter.. If it falls down, it
will always land on the buttered side.
(ပေါင်မုန့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းကို ထောပတ်သုတ်မယ်ဆိုတာ သင်ဘယ်တော့မှ စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လွတ်ကျသွားခဲ့ရင်တော့ ထောပတ်သုတ်ထားတဲ့ ဘက်က မြေကြီးပေါ် ကျတာပဲ။)
(ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျတဲ့ အရာမှန်သမျှဟာ မတွေ့နိုင် မယူနိုင်တဲ့ ထောင့်တွေဆီကို လိမ့်သွားကြလိမ့်မယ်။)
(တစ်စုံတစ်ရာကို ဖော်ထုတ်ပြလိုက်ချက်ချင်းပဲ၊ ကောင်းတယ်ဆိုရင် သူများတွေက ယူသွားကြတယ်၊ ဆိုးတယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ဖြစ်တော့တာပဲ။)
(ရွှေရှိတဲ့သူက စည်းမျဉ်းတွေကို ပြုလုပ်တယ်…. မာဖီရဲ့ ရွှေရောင် စည်းမျဉ်းတွေလေ။)
သင်က စောစောလာရင် ဘတ်စ်ကားက နောက်ကျမှ ရောက်တယ်။ နောက်ကျမှ လာရင်ရင် ဘတ်စ်ကားကတော့ နောက်ကျဆဲပါပဲ။
(ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ၀ယ်ပြီးသွားတာနဲ့ တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ ပိုဈေးသက်သာသာနဲ့ရောင်းတဲ့ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းကို တွေ့တော့တာပဲ။)
(တန်းစီ ရပ်နေစဉ်မှာ (ငွေရှင်းကောင်တာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)၊ တစ်ခြားလိုင်းတွေက ပိုပြီးတော့ မြန်မြန် သွက်သွက်ကို ပြီးသွားပြီး၊ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ သူဟာလည်း အရှုပ်ဆုံး၊ အများဆုံးတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။)
(သင့်မှာ စာရွက်ရှိရင် ဘောလ်ပင် မရှိဘူး။ ဘောလ်ပင်ရှိပြန်တော့ စာရွက် မရှိဘူး။ နှစ်ခုစလုံး ရှိနေချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှ မခေါ်တော့ဘူး။)
If you have bunked the class, the professor has taken attendance
(ကိုယ်အတန်းလစ်တဲ့ အချိန်တွေဆိုရင် ပါမောက္ခက အမြဲ attendance ခေါ်တတ်တယ်။)
(တံခါး ဘဲလ်တွေ၊ မိုဘိုင်လ်းဖုန်းတွေဟာ ကိုယ်လည်း ရေချိုးခန်းဝင်ရော မြည်ရောပါပဲ။)
Afteralong wait for bus no.20, two 20 number buses will always pull in together and the bus which you get in will be more crowded than the other
(ကားနံပါတ် (20) ကိုလည်း အကြာကြီး စောင့်ပြီးရော ကားနှစ်စီးက ပြိုင်တူလာတယ်.. အဲ.. ကိုယ်တက်လိုက်တဲ့ ကားက လူပိုကြပ်နေတတ်တယ်။)
(မနက်ဖြန်သာ စာမေးပွဲရှိကြည့် ဒီနေ့ည မီးပြတ်တော့တာပဲ။)
(လေတိုက်ရာ လမ်းကြောင်းတွေ ဘာတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့သူ မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေဟာ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်တဲ့သူဘက်ကို လာတော့တာပဲ။)
Filed under Random Thoughts and tagged thoughts |	10 Comments
Posted on July 15, 2008 by cuttiepinkgold
ခုတစ်လော ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းလေး အကြောင်း ကျွန်မ ခဏ ခဏ တွေးနေမိတယ်။ ၂၀၁၀ ကျရင် ကျွန်မ ဘယ်ဆီ ရောက်နေမလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေမလဲ။ ၂၀၁၀ မှာ လူတွေ ဘာဖြစ်နေမလဲ၊ ဘယ်အရာ နောက်ကို တစ်ကောက်ကောက် လိုက်နေကြမလဲ။ ၂၀၁၀ မှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ ဘာများ ဖြစ်လာမှာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးရော ၂၀၁၀ မှာ ဘာဖြစ်နေလိမ့်မလဲ။
သေချာတာကတော့ ၂၀၁၀ ရောက်ရင် ကျွန်မ အသက် (၂) နှစ်လောက် ထပ်ကြီး လာမှာပေါ့။ ဒါကတော့ ပြေးမလွတ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုပဲလေ။ နောက်ပြီး ၂၀၁၀ မှာ နိုင်ငံကြီးမှာ ရွေးကောက်ပွဲ စမယ်ဆိုပဲ။ “အေးချမ်း သာယာ၍ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးပြီး စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် သစ်ကြီးကို စတင်မယ်ဆိုပဲ” (ရှည်လိုက်တာနော်)။ နိုင်ငံရေးတွေ ဘာတွေ ကျွန်မသိပ်တော့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဘယ်အစိုးရပဲ တက်တက်၊ ဘယ်သူပဲ အုပ်ချုပ် အုပ်ချုပ် ၂၀၁၀ မှာတော့ မူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲရတော့မှာပေါ့။ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတာက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းဆိုင် အာဆီယံနဲ့လည်း ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး စာချုပ်လေး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AFTA (Asian Free Trade Area) အကြောင်းလေးကိုပါ။
ပြောတာကို ကြားရသလောက် ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၀ ကစပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံတွင်း အလကား ကုန်သွယ်လို့ရတော့မယ်။ ကုန်စည် စီးဆင်းမှုတွေ လျင်မြန်လာတော့မယ်။ AFTA အရ အကောက်ခွန်နှုန်းထားတွေလည်း ကျဆင်းပြီး နိုင်ငံခြားဖြစ် ပစ္စည်းတွေကို ဈေးနှုန်း သက်သက်သာသာနဲ့ ၀ယ်ယူတင်သွင်းနိုင်တော့မယ် ဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်မ၀င်စားပဲ မနေနိုင်ဘူးရှင့်။ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက်လောက် စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်း မဆိုးဘူး မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့လည်း International Business ထဲကို အစလှမ်းနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်း တစ်ခုစတင်လို့ ရလာတော့မှာပေါ့။
ဒီတော့ ကျွန်မ ဥာဏ်မီသလောက်လေး တစ်ချက် တွေးမိတယ်ရှင့်။ Custom Duty “0” ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ပို့ကုန်က ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ။ နိုင်ငံတစ်ကာကတော့ လာတော့မယ်လေ။ စီးပွားရေး ချဲ့ထွင်ဖို့၊ သူများနိုင်ငံမှာ Investment များများ လုပ်ဖို့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ထုတ်ကုန်တွေကို နိုင်ငံခြားကို ပေါပေါများများ တင်သွင်းပြီး စီးပွားရှာဖို့။ စီးပွားရေး လမ်းကြောင်းတွေ တော်တော်ပွင့်သွားမယ့် အခြေအနေပါ။ ဒီလို အခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကိုယ်က ဘာမှမသွင်းနိုင်ပဲ၊ သူများ export လုပ်လာတာကိုပဲ ခံပြီး အိတ်ထဲကပဲ ထုတ်နေမလား၊ နိုင်ငံရဲ့ Export အခြေအနေကကော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဘယ်လို ထုတ်ကုန်မျိုးကို များများ တင်ပို့ကြမှာလဲ။ ဆန်စပါးလား၊ ကျွန်းသစ်လား၊ ကျောက်မျက်လား၊ ကောက်ပဲသီးနှံလား ပြောရအောင် လက်ရှိ အခြေအနေကလည်း တော်တော် အားရစရာ ကောင်းလှတာကို။
ပြီးတော့ International Business ထဲကို ၀င်ရတော့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအချင်းချင်း နားလည်မှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ စည်းလုံးမှုတွေ ရှိနေရမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မတို့ Business လုပ်တဲ့ နေရာမှာတောင် လန်ဒန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကက လူလည်း မမြင်ဖူး၊ တွေ့လည်း မတွေ့ဖူး ပဲနဲ့ ဒီအတိုင်း email နဲ့ပဲ စာချုပ်တွေချုပ်၊ Bank Account နဲ့ ပိုက်ဆံတွေချေ လုပ်နေကြတာဟာ နားလည်စည်းလုံးလို့ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ကော ဘာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ။ နိုင်ငံတွင်းမှာ ထိုးထွင်းကောင်းစားနေတဲ့ Company တစ်ခု နှစ်ကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး နိုင်ငံလိုက်ကြီးက ဘာတွေလုပ်နေလဲ ဆိုတာကို ကျွန်မစဉ်းစား ကြည့်မိတာပါ။ အင်္ဂလိပ် လက်အောက်က လွတ်လာတာ နှစ် ၆၀ လောက်ရှိပြီ။ ခုချိန်ထိ “ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေ” ၊ ” တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး” တွေ အော်နေရသေးတဲ့ နိုင်ငံက International ကို ဘယ်လိုများ ၀င်မှာပါလိမ့်။
နောက် တစ် ချက်က ပညာရေးပါ။ ၂၀၁၀ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ASEAN ဒေသတွင်း Vacancy တစ်ခုပေါ်ရင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံအချင်းချင်း လှမ်းလျှောက်လို့ရတယ်လို့ ပြောသံလည်း ကြားမိပါတယ်။ စင်ကာပူက Vacancy ကို မြန်မာနိုင်ငံက လှမ်းလျှောက်၊ အင်တာဗျူး၊ ကြိုက်ရင် ခန့်၊ နိုင်ငံခြားသားက အခန့်သားလေး လာလုပ်ပေါ့။ ခု လူတွေ နိုင်ငံခြား ထွက်ကြသလို အမောတကော အလုပ်ရှာစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းလာတော့မယ်ထင်တယ်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ competition လည်းပိုများလာမယ်။ သူ့ထက်ငါ တော်သူတွေကို လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပိုမျှော်လာကြတော့မယ်။ ဘယ်ကျောင်းက ထွက်တဲ့ သူကိုမှ ခေါ်မယ်၊ အလုပ်ခန့်မယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံက လူကို ဦးစားပေးမယ်၊ အဲလိုတောင် ဖြစ်လာမလား မသိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရာကောင်း တစ်ခု လစ်လပ်ရင်လည်း ဖိလစ်ပိုင်လို နိုင်ငံကနေ လှမ်းလျှောက်ရင် လျှောက်နေမှာ။ ပြောလို့တော့ မရဘူး။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ဒီအချိန်မှာ သူ့နိုင်ငံသား ငါ့နိုင်ငံသား ကြည့်နေတော့မယ် မထင်ဘူး။ တော်ရင် ဘယ်သူ့ကို ဖြစ်ဖြစ် ခန့်လိုက်တော့မှာပဲ ထင်တယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့တွေ ဒီအခွင့်ကောင်းလို့ လက်မလွတ်ဖို့ ခုကတည်းက ကြိုးစားရတော့မှာပေါ့။ အရည်အသွေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ထားရတော့မှာပေါ့။ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ တစ်သီကြီး ရနေနိုင်အောင် ကြိုးစားရတော့မှာပေါ့။ တွေးကြည့်မိတယ်ရှင့်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူး။ ပညာရေး စနစ်ဆိုတာလည်း နာတာရှည် ရောဂါ ဖြစ်နေပြီလေ။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားလို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးရှုံးရတော့မှာလား။ ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံခြားက ABE, ACCA, LCCI စတဲ့ စာမေးပွဲတွေကိုပဲ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး ဖြေကြမလား။
နောက်တစ်ခုက Greater Mekong Subregion (GMS) ဆိုတာကလည်း စလာတော့မယ် ဆိုတော့ နိုင်ငံကို Tourism ကနေ ပိုက်ဆံရှာဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းပေါ့။ ခုတော့ ဒီအခွင့်အလမ်းကောင်းကနေ ပိုက်ဆံရှာဖို့ မဆိုထားနဲ့ နိုင်ငံတကာက လုပ်တဲ့ Travel and Tourism Meeting တွေကို တက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ အင်မတန်မှ မျက်နှာငယ်ရတယ်တဲ့လေ။ မင်တို့ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကိုပဲ ကောင်းအောင် လုပ်ကြပါအုံးး.. ရှေ့ဆက်ဖို့ အစဉ်းစားပါနဲ့အုံး ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေကို ခဏ ခဏ အပြောခံရလေ့ ရှိတယ်ဆိုပဲရှင့်။
ဘာပဲ ပြောပြော ၂၀၁၀ ကတော့ မကြာခင်မှာ လှလှပပကြီးကို ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဘာတွေပြောင်းလဲ မလဲဆိုတာကိုတော့ ဇတ်ခုံပေါ်မှာပဲ ရှုစားရတော့မှာပေါ့ရှင်။
Posted on May 24, 2008 by cuttiepinkgold
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်.. အစကတော့ မဲရုံသွားပြီး x ကြက်ခြေခတ်ကို လှလှလေး ခတ်မလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် နာဂစ်ကြောင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံး နှာကစ်သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ မဲဆိုတာကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားတော့ပါဘုး.. ကိုယ်က ဘာပဲပေးပေး သူတို့ကတော့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေအုံးမှာ မဟုတ်လား…။ အထက်မြန်မာပြည်နဲ့တင် 92.4% ထောက်ခံမဲ ရပြီးနေတာ.. နောက်ဆက်တွဲ မဲပေးလို့ရော ဘာတွေများ ထူးလာအုံးမှာလဲ။ 23 ရက်နေ့ည ကထင်ပါရဲ့.. ရပ်ကွက်လူကြီး ပြောတာကြားလိုက်တယ်.. ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ဆိုင် 92.8% ရနေပြီတဲ့။ ကျွန်မတို့က ရပ်ကွက်ရုံးလူနဲ့ အပေါ်ထပ် အောက်ထပ် နေတာဆိုတော့ ပြောတာ ဆိုတာ တော်တော်ဆင်ခြင်ရတယ်။ ဒါတင် ဘယ်ကအုံးမလဲ.. အောက်ထပ်မှာလဲ ဗိုလိကြီးတစ်ယောက် နေသေးတော့ အိမ်မှာနေရင် ပြောချင်တာကို မပြောရဘူး လေတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်စြဖ်ပါ..ထောက်ခံမဲပဲ များများ၊ ကန့်ကွက်မဲပဲ ပေးကြပေးကြ.. ကျွန်မ တစ်ကယ်စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ပြောရရင် ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်နေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံခေါင်ဆောင်ကြီးများကို ဘယ်လိုနှဏ်လုံးသားနဲ့များ လူလုပ်နကြပါလိမ့်လို့ တွေးမိပါရဲ့။ ကျွန်မ မဲသွား မပေးခဲ့ပါဘူး။ ရုံးကလူတွေ ၊ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေ တော်တော်များများတော့ အမှားခြစ်ကြတယ်တဲ့။ အမှားပေးပေး အမှန်ပေးပေး နင့်အဖေကတော့ စင်ပေါ်မှာပဲလို့ ကျွန်မ တစ်ခါ ပြောခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။ ဘာမှ မပေးလည်း ဘာမှထူးလာမှာ မဟုတ်လို့ ဘာမှကို သွားမပေးခဲ့ဘူး။ စိတ်လေတယ်။ နောက်နေ့ သွားလှူဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်အုံးမယ်။